Fivoriana tsy ara-potoana :: Be fitakiana momba ny fanaraha-maso sy ny fanoherana ireo Antenimiera • AoRaha
Fivoriana tsy ara-potoana Be fitakiana momba ny fanaraha-maso sy ny fanoherana ireo Antenimiera
Ao raha. Hafana ny adihevitra eny amin’ny Antenimiera roa tonta mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana, nanomboka omaly. Teo amin’ny kabary fanokafana, samy nanana ny fitakiany no tsy nisy nitsitsy fitenenana na ny teny Tsimbazaza na ny teny Anosy.
Iraisan’izy ireo ny fangatahana amin’ny governemanta amin’ny fanomezana antsipiriany mikasika ny Politikam-panjakana ankapobeny fanjakana (PGE) mandritra ny fanolorana izany. Nibahan-toerana kosa ny resaka momba ny toeran’ny fanoherana eto amin’ny firenena, tetsy amin’ny lapan’Anosikely.
Anisan’ny anjara asan’ny fahefana mpanao lalàna ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka, araka ny andininy faha-68 ao amin’ny Lalàm-panorenana. Ahafahan’izy ireo mampihatra izany fahefana nomena azy izany no nahatonga an-dRazanamahasoa Christine, filohan’ny Antenimierampirenena, hangataka ny antsipirian’ny PGE miaraka amin’ireo tanjona kendrena sy ny fotoana hanatanterahana azy.
« Izany no ahafahanay mandrefy ny asa vitanareo rehefa tonga ny fotoana hanaovana tombana», hoy izy. Nanamafy an’io teboka io ihany koa ny teny anivon’ny Antenimierandoholona nandritra ny lahateny fanokafana.
Ankoatra ny PGE sy ny fitakiana ny karaman’ireo loholona mbola tsy voaloa, dia anisan’ny nifantohan’ny kabarin-dRakotovao Rivo, filohan’ny Antenimierandoholona sady nanokanany minitra maromaro mihitsy ny tolo-dalàna fanitsiana mifehy ny antoko mpanohitra sy ny fanoherana. Nampatsiahy izy ny amin’ny tokony hanokafana ny adihevitra amin’ireo antoko politika hafa, izay toa niendrika tsindrom-paingotra ho an’ireo mpifanandrina politika, amin’izao fotoana izao.
« Tsy sanatria ataon’ny antokon’olona fitaovana hampanginana ny fanoherana izany lalàna izany.(…) Hisy fotoana hakan-kevitra amin’ireo ankolafin-kery rehetra mba hahamarim-pototra tsara ny lalàna momba ny fanoherana, mba tsy hanenenana any aoriana», hoy izy.
Ho feno dia feno araka izany ny fandaharam-potoana mandritra ireo roa ambin’ny folo andro hivorian’ny Parlemanta ireo.
Fandikana lalànan’ny fifamoivoizana :: Nahatratra dimy amby fitopolo ny sarety sy posy naiditra trano fihibohana
Fahatongavan’ny Papa François :: Hiara-hiasa amin’ny Zandarimaria amin’ ny lafiny fiarovana ny Amerikana